Nnukwu poppy art nwụnye a kwesịrị-ahụ na Munich maka Ncheta Day
Location: Mbido » Ịdee » Na-agbasa News Travel » Nnukwu poppy art nwụnye a kwesịrị-ahụ na Munich maka Ncheta Day
Sundaybọchị Sọnde a bụ afọ 100 nke Armistice nke November 11, 1918, na-egosi njedebe nke Agha I.wa Mbụ.
Ihe eji arụ ọrụ "Never Again" nke popp 3,500 ga-eme na Munich, Germany iji mee emume a nke narị afọ, nke mbụ ụdị ya na Germany.
Nke a bụ "Detuo Poppy?"
Ee e, onye na-ese ihe, Dr. Walter Kuhn, onye lara ezumike nká banyere ala na City Planner na Munich kwuru. O kwuru na ya nara mkpali ya na Flanders (Belgium) ihe dịka afọ iri gara aga na Compiegne. Ma o were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10 iji kwenye City nke Munich ime ya. Ọ fọrọ nke nta ka ọ kwụsị, ọ sịrị, mgbe ọ mechara nweta njedebe ikpeazụ naanị 3 ọnwa gara aga.
Nke ahụ hapụrụ obere oge iji hazie maka ọrụ “Ọ dịghị mgbe ọzọ” maka mmemme ga-adịru izu atọ.
N'oge ọkọchị, ndị mbịambịa 2 si Afghanistan tinyere ndị na-enyere ha aka chịkọtara ihe na-acha uhie uhie na nnukwu oji velvet etiti iji mebe poppies 3,500, nke ọ bụla dịka nche anwụ. Akọrọ ha n'ụzọ miri emi nke ala ma tinye ha na osisi ndị na-abata na ahịhịa ahụ iji nagide ihu igwe na eburu mmiri nke ifuru.
Ndị Poppies na-ese Walter Kuhn - Foto © E. Lang
Agbanyeghị na ụbọchị ncheta dị na Nọvemba 11, 2018, ọtụtụ n’ime anyị anaghị echeta ya, yabụ ụbọchị chọrọ akụkọ iji mee ka ọ dị ndụ. Emeghị nke a naanị site na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-atọba ihe mkpuchi nke ihe osise na-esochi.
Poppies bụ okooko osisi mbụ batara na ili ozu nke ndị agha dara ada - nke kachasị mkpa, n'ihi na ihe karịrị nde mmadụ 17 nwụrụ na Agha I.wa Mbụ.
Simon Kendall, British Consul na Munich, kwuru na poppy abụworị akara nke ọtụtụ mba Commonwealth kemgbe mbido afọ 1920. Ihe niile malitere site na uri agha nke na-akọwa poppies, "Na Flanders Fields," nke dọkịta Canada John McCrae dere ma bipụtara na magazin Britain "Punch" na 1915.
Nnukwu poppy arụnyere ihe karịrị 900,000 poppies na Tower na London na 2014 bụ nke a na-agaghị echefu echefu ma dọta karịa ndị ọbịa 4 nde, gụnyere Queen Elizabeth.
A makwaara dị ka Armistice nke Compiègne site na ebe ọ bịanyere aka na ya, ọ malitere na 11 am Paris oge na November 11, 1918 wee gosi mmeri maka ndị otu ahụ na mmeri zuru oke maka Germany, ọ bụ ezie na ọ bụghị inyefe onwe ha. Agbanyeghi na Armistice kwusiri agha a, odi nkpa ka odi ogologo 3 rue mgbe Nkwekorita nke Versailles nke binyere aka na June 28, 1919, nke malitere na Jenụwarị 10, 1920.
Taa, obodo Munich ka na-alụ ọgụ maka oge gara aga. Mgbe Agha Worldwa Mbụ gasịrị, square nke Königsplatz ahụla mgbanwe dị ukwuu n'ime iri afọ ndị gara aga. Ejiri Königsplatz maka nnukwu ngosipụta ndị agha ma ọ bụ ebe ebe ọkụ ọkụ akwụkwọ Nazi mere na May 10, 1933. Akwụkwọ ọkụ a bụ mkpọsa nke Studenttù Ndị Mmụta German jikọtara iji gbaa akwụkwọ na Nazi Germany na Austria ọkụ.
N'ime oge nke atọ nke ọchịchị Reich, Munich ka bụ isi obodo ime mmụọ nke ndị Nazi, nwere nnukwu ụlọ, ebe ngosi ihe mgbe ochie maka ụdị ọrụ nka Adolf Hitler kwadoro, na ihu arụsị nke nnwale Nazi etinye na November 1923. A makwaara dị ka Beer Hall Putsch , nke a bụ ọdịda dara ada nke onye ndu Nazi Party Adolf Hitler weghaara ọchịchị na Munich na November 8-9, 1923.
Ejiri saịtị ndị a dị ka ihe ngosi nke emume ncheta na mmemme a na-eme kwa afọ maka ndị otu SS ọhụrụ. Schutzstaffel, nke a na-akpọkarị SS, bụ nnukwu ndị isi na-ahụ maka ọrụ n'okpuru Adolf Hitler na Nazi Party na Nazi Germany, na mgbe e mesịrị na Europe dum ndị German weghaara n'oge Agha IIwa nke Abụọ.
Pantheon bụ ụdị ụlọ nsọ nsọpụrụ maka “ndị dike” nke Hitler wuru ma bụrụ nke ndị America bibiri na 1947. “Führerhaus dị nso” ghọrọ Amerịka Haus na 1947-1957 tupu ọ ghọọ mahadum mahadum sayensị maka ọdịbendị na egwu nke dị taa.
Egwuregwu European Requiem Concert na nsọpụrụ nke njedebe nke Agha Iwa Mbụ, ga-aka akara mmeghe nke ntinye ọrụ "Ọ dịghị ọzọ" nke ga-emeghe na 11 nke ụtụtụ na Nọvemba 11, 2018. Usoro ncheta a mụrụ nke ọma ga-agụnye ọtụtụ egwu egwu, uka maka mgbanwe udo na ndị agha metụtara, yana okwu ndị dị ka "Ezinụlọ m mgbe Agha Worldwa Mbụ gachara" nke ga-echikọtakwa nka ahụ.
Taa na London, Prince Harry tọgbọrọ obe mbụ nke ncheta na ncheta ahụ, ụbọchị atọ tupu otu narị afọ nke njedebe nke Agha I.wa Mbụ.
Ubi Ncheta na-emepe kwa afọ na Tọzdee tupu Ncheta Sọnde. Emere ya na ala Westminster Abbey kemgbe 1928 ma Poppy Factory na-ahazi ya.
Afghanistan Europe Germany London Munich Paris agha
Ndị ọbịa India ga-agbakwunye ụlọ abalị 10.8 nde
Oklahoma City's Skirvin Hilton nkwari akụ n'ime afọ